Microsoft and MEAN - MYSTERY ZILLION
Microsoft and MEAN
November 2014 in Daily Life
Let discuss of integration of microsoft and MEAN(Mongo DB, Express , AngularJS, Node.js)http://www.microsoft.com/en-us/openness/#home
ဘယ်အပိုင်းကို စပြောချင်တာလဲ ? သူ့ရဲ့ site မှာလည်း အဓိက Azure ကြော်ငြာသလိုပဲ တွေ့ရတယ် တခြားထွေထွေထူးထူးတော့ မတွေ့မိဘူး
.net က opensource ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ http://www.embarcadero.com/ လို cross platform မှာ run ပြီး datacentralize လုပ်လို့အဆင်ပြေနိုင်လောက်လားပေါ့
Opensource ဆိုတာနဲ့ Cross Platform ဆိုတာ နှစ်ခုဟာ မဆက်စပ်ဘူးလေ။ Microsoft က သူ့ရဲ့ Visual Studio နဲ့ တချို့ Development Tools တွေကို Opensource လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာက အဲဒါတွေကို ရေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကို Licence တခုနဲ့ ဖွင့်ပေးလိုက်တာ လို့ပဲဆိုတယ် Opensource လုပ်လို့ ဥုံဖွဆိုပြီးတော့ တခြားနေရာတွေမှာ သုံးလို့မရဘူးလေ ဒါပေမယ့် Opensource ဖြစ်တဲ့အတွက် Contribute လုပ်နိုင်မယ့်လူရှိလို့ အခြားသော Platform အတွက် Port လုပ်မယ်ဆိုရင် Source Code လည်းရှိနေတဲ့အတွက် License နဲ့အညီ Port လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်လို့ရတဲ့ အခြေအနေပဲရှိတယ်။
Mac OS , iOS ,Android,Linux တို့ပေါ်မှာ run လို့ရပြီလို့ဆိုထားလို့ပါ။ Delphi C++ တို့လို့တစ်ခါရေးရုံနဲ့ အားလုံးပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လားပေါ့။
Can't run now. They said , it will available for Mac and Linux.
pls could you suggest me ? embarcadero (delphi) and microsoft .net which is the best for cross developer and bigdata development
Big Data ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ အတိအကျမရှိသလို ရေရေရာရာလည်း မရှိပါဘူး Generic တယောက် တပေါက် Defination ပဲရှိတယ် အဲဒီတော့ Big Data ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးပြီးမေးမယ့်အစား ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တာလဲ လုပ်ချင်တာကို နမူနာပြောပါ အဲဒါမှပဲ အကြံပေးလို့ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်